SomaliTalk.com » 2014 » November » 11
Home » Archive Maalinta November 11th, 2014
Cut all ties with Somalia, says Kenyan House committee
THE Kenyan government may be forced to sever ties with Somalia if recommendations by the National Assembly’s Defence and Foreign Relations committee are adopted by the House. The committee, chaired by Tetu MP Ndung’u Gethenji, has claimed that the decision by the Somali government to take Kenya to the International Court of Justice over a maritime boundary dispute was hostile and therefore...
Baarlamaanka Kenya oo Dowladiisa ka dalbadey in Xiriirka u jarto Dowlada Soomaaliya Sababo la xiriira Muranka Badda.
Kulan ay isugu yimaadeen Baarlaamanka dalka Kenya 11-11-2014 islamarkaana uu shir Guddoominayey Gudoomiyaha Baarlamaanka Wadanka Kenya ayaa waxaa looga dooday in dowlada Kenya ay xirirka kala dhexeya wadanka Soomaaliya ay jarto ,sababo la xiriira muranka Badda iyadoo lagu wado in dhawaan labada dowladood ay tagaan Maxkamada Hague ee Caalamiga si loo kala saaro. Xubnaha Baarlamaanka dalkaasi Qaar ka...
RW. Cabdiweli “Waa inaan meel uga soo wada jeedsano ilaalinta Dastuurka KMG iyo Shuruucda dalka”
Warsaxaafadeed: Muqdisho, 11, Nov, 2014….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Feederaalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ayaa ku tilmaamay khilaadka siyaasadeed ee hadda dalka ka jira inuu u baahan yahay in lagu xaliyo wada xaajood iyo is qancin . Ra’iisul Wasaarhaa ayaa ku tilmaamay khilaafka siyaasadeed noocaan ah uu dalka u horseedi karo in aan si wanaagsan loo xaqiijin Hiigsiga...
Mu’assasada Al-Minhaaj Galdogob oo Safar Dacwo ku tagtay Xero-jaale iyo Isqanbuus
(Galdogob) Culumada Mu,assasada Alminhaaj Galdogob oo ay wehliyeen Odoyaal , Waxgarad iyo waliba Masuul kamid ah Gudida joogtada ah ee Golaha Deegaanka degmada ayaa waxay ugu bexeen Jowlo dacawi ah qaybo kamid ah tuulooyinka hoostaga Degmada Galdogob. Jawladaani oo ah tii labaad ee Mu’asasadu ay ugu baxdo Deegaanada Hoostaga Galdogob ayaa waxaa looga gol lahaa in lagu wacyi galiyo Dadka deegaanadaas...